उखु किसानले भुक्तानी पाएनन् - Nepal Samaj
१५ साउन, २०७७नेपाल समाजअर्थ
नवलपरासी । जिल्लाका उखु किसानले चिनी उद्योगहरुलाई उधारोमा उखु दिए वापतको करिब रु. २२ करोडको भुक्तानी पाएका छैनन् ।
किसानहरुले उद्योगमा उधारोमा उखु दिए वापत लुम्बिनी चिनीमिलबाट रु. ९ करोड, इन्दिरा सुगर मिलबाट रु. ५ करोड र वाग्मती चिनीमिलबाट रु. ८ करोडको भुक्तानी पाउनुपर्ने बाँकी छ । चिनी उद्योगका सञ्चालकले किसानको रकम भुक्तानी गर्न आलटाल गर्दै आएपछि उद्योग मन्त्रालयमार्फत उद्योग सञ्चालकलाई आवश्यक सहजीकरण गर्न सो बारे उद्योग मन्त्रालयमा लिखित जानकारी गराइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागरमणि पाठकले बताए ।
तीमध्ये वाग्मतीको आर्थिक वर्ष २०७६/७७, लुम्बिनीको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र इन्दिराको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा किसानको उखु खरिद गरेवापतको रकम भुक्तानी दिन बाँकी देखिएको हो । यद्यपि वाग्मती चिनी उद्योगले अब तत्कालै एक साताभित्र रकम भुक्तानी गर्ने तयारी गरिएको उद्योगका महाप्रबन्धक टङ्कनाथ काफ्ले बताए ।
यहाँ चार ठूला उद्योग रहेकामा मोहिनी चिनी उद्योग स्थापना भएको वर्ष बाहेक अन्य सबै वर्ष चिनी उत्पादन बन्द गरेको छ भने दुई वर्षदेखि लुम्बिनी चिनी उद्योगमा चिनी उत्पादन बन्द हुँदै आएको छ । उद्योगहरुले विभिन्न वाहानमा रकम भुक्तानी गर्न आलटाल गर्दै आएकाले तत्काल रकम भुक्तानी शुरु नभए किसान आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने जिल्ला उखु कृषक समितिका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवले बताए ।
यद्यपि जिल्लामा नियमित रुपमा इन्दिरा चिनी उद्योग मात्र सञ्चालनमा आउने गरेको छ भने किसानसँग उखु लिए बापत अघिल्लो वर्ष रकम भुक्तानी नगरेका कारण वाग्मती चिनी उद्योग यस वर्ष सञ्चालन हुन सकेन । पश्चिम नवलपरासीमा सुस्ता, प्रतापपुर, पाल्हीनन्दन र सरावल गाउँपालिकामा उखु खेती गरिन्छ । पछिल्लो पटक यस क्षेत्रमा उखु उत्पादनमा कमी आएको छ ।
कृषि ज्ञान केन्द्र नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पश्चिम) का अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कूल ३ हजार ६२३ हेक्टर क्षेत्रफलमा १ लाख ७१ हजार ३५० मेट्रिक टन उखु उत्पादन भएको छ । यसैगरी अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कूल ३ हजार ६६८ हेक्टर क्षेत्रफ १ एकलमा लाख ७३ हजार ४९० मेट्रिक टन उखु उत्पादन भएको थियो ।
यो साता ८३ अर्बको शेयर कारोबार
पर्सामा ब्याड राख्ने बेलामा धानको बीउ अभावः भारतीय बजारमाथि किसान निर्भर
कालिकोटको तिलागुफामा सामूहिक स्याउ उत्पादन जुटे युवा
डिम्याट खाताको सङ्ख्या एकै वर्षमा दाेब्बर, ३५ लाख नाघ्याे